You are at:Home»SPORT»Sixhomile isantya sebhola yamakhwenkwe aselula
By Grocott's Mail Contributors on	 October 18, 2019 SPORT
Amakhwenkwana aselula asathe chu nemidlalo yawo nanjengoko iye yaqhuba nakulempela veki esisuka kuyo. Kuqale imidlalo yabo bangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithathu.
Kumdlalo obuvutha ngeyona ndlela, iCameroon ibambene ngenqaku elinye macala neAfrican spears logama iJoza Callies nayo ibambene ngenqaku neEluxolweni.
Kwidabi lwabakhaya iSophia Stars ikhuphe onke amaqhinga namava ayo ngethuba ibuya sele isilela ngasemva ngenqaku, yabetha iBlack Stars ngamanqaku amane kwelinye.
ICity Pirates ibethe iGolden Brothers ngamabini kwelinye, logama yona iSakhulutsha itywatyushe iGrahamstown United ngamanqaku amane eqandeni.
Kwimidlalo yabangaphantsi kweminyaka elishumi elinesihlanu iEluxolweni ibhaxabule iJoza Callies ngamanqaku amane kwelinye, logama yona iGolden Brothers ibethe iCity Pirates ngamanqaku amabini kwelinye kumdlalo obushushu ngeyona ndlela.
ISophia Stars ibhaxabule abakhaya bayo ngamanqaku asixhenxe eqandeni, yaze yona iSakhulutsha yabetha iGrahamstown United ngamanqaku amahlanu eqandeni, logama iAfrican Spears ibethe iCameroon ngamathathu kwelinye.
Kukhangeleka ngathi kuya kusondelwa kancinci kuvutho ndaba ngoku nanjengoko amaqela amaninzi ezama ukuzi cacisa ebonisa oko abhinqe ngako.